အူသိမ်အူမကင်ဆာ: ဒီလေ့ကျင့်ခန်းရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့ကူညီနိုင်ပါစေလေ့လာမှုပြောပါတယ် - သင်သည်ဤပြုကြသနည်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ "အူကင်ဆာ: - သင်ဤပြုကြဒီလေ့ကျင့်ခန်းရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့ကူညီနိုင်ပါစေလေ့လာမှုကဆိုပါတယ်?
အူသိမ်အူမ ကင်ဆာ ယင်းကျယ်ပြန့်အူသိမ်အူမ (အူမကြီး) နှင့်နောက်ကျောကျမ်းပိုဒ် (rectum) တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ est သြစတေးအူမကင်ဆာအဖြစ်လူသိများ။ ကုသမှုကင်ဆာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့အူသိမ်အူမအတွက်စတင်သည်နှင့်မည်သို့ဝေးကင်ဆာပျံ့နှံ့ပွီသည်အဘယ်မှာရှိမူတည်ပါသည်။ ခွဲစိတ်ကုသများသောအားဖြင့်အူသိမ်အူမကင်ဆာများအတွက်အဓိကကုသမှုဖြစ်ပါသည်, လတ်တလောလေ့လာမှုရည်မှန်းချက်အကူအညီနဲ့မှစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအချို့သောအမျိုးအစားကင်ဆာဆဲလ်များကြီးထွားမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါစေဘယ်လိုအလင်းခဲ့တှရေဲ့အဓိပ်ပာ။
ထုတ်ဝေအဆိုပါလေ့လာမှု, ဇီဝကမ္မဗေဒ၏ဂျာနယ်ပြီးနောက်-တွေ့ရှိခဲ့မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုကြားကာလသင်တန်း (HIIT) ၏တိုတောင်းတဲ့ session တစ်ခု, အူမကြီးကင်ဆာဆဲလ်များကြီးထွားမှုကိုလျှော့ချ, ဤရောင်ခြင်း၏တိုးမြှင့်ညွှန်းကိန်းသြစတေးခဲ့၏။
သို့သျောစာတမ်းတွေ့ရှိချက် sont égalementအရေးကြီးသော, HIIT, ဘောင်းဘီတိုသက်ဆိုင်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအစားအသောက်များတွင်၏တစ်ခုတည်း session တစ်ခုအပြီးတွင်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ကို Activision နေတာ Que le သက်ရောက်မှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဖလှယ်အောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်း၏စူးရှသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများထိတွေ့ထပ်ခါတလဲလဲဒါက HIIT ကင်ဆာဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဖို့ contribuer နိုင်ပါစေအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဤရလဒ်သည်ပုံမှန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တစ်ဦး Science ထိနျးသိမျးတက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံလုပ်နေတာ၏အရေးပါမှုကိုအားကောင်းလာစေပါတယ်။
Waterloo, အွန်တက္ကသိုလ်နှင့် တွဲဖက်. Queensland ပြည်နယ်၏တက္ကသိုလ်အားဖြင့်ကျင်းပအဆိုပါလေ့လာမှု, လေးခုအစည်းအဝေးများကျော် HIIT ကိုရွှေ 12 ရက်သတ္တပတ်၏တစ်ခုတည်း session တစ်ခုဖြစ်စေ Completing ပါဝင်အူမကင်ဆာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ။ သူတို့အသွေးနမူနာအချိန်ချက်ချင်းပြီးနောက်-မီးဖိုသင်တန်းရက်သတ္တပတ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများတစ်ခုတည်း session ကိုအပြီးသို့မဟုတ်ကြွင်းသောအရာမှာစီမံမိတ်ဖက် file များနှင့်အူမကြီးကင်ဆာဆဲလ်များကြီးထွားမှုကိုလေ့လာရန်ထိုအခါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်စေခဲ့သည်။
တွေ့ရှိချက်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးဂျိမ်းစ် Devin, သုတေသနပေါ်မှာခဲပြားကိုရေးသားသူ said:
"ကျနော်တို့က-ရှိသည်ဟုမေလစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအူမကြီးကင်ဆာဆဲလ်များကြီးထွားမှုကိုဟန့်တားနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍဒါကပြ။ HIIT တစ်ခုစူးရှသောအဆုံးပြီးနောက်အချိန်အတွက်တိကျတဲ့ရောင်ရမ်းတိုးချက်ချင်းပြီးနောက်-လေ့ကျင့်ခန်းရှိခဲ့သည်, qui Hypothesised ကင်ဆာဆဲလ်များ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချအတွက်ပါဝင်ခံရဖို့ရှိပါတယ်။
"ဒီတစ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလူနေမှုပုံစံစတဲ့အကျိတ်ကိုဖြေရှင်းရန်လူ့အူမအတွက်သိသာထင်ရှားသောဖြစ်နိုင်ပါစေကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ယခုကြှနျုပျတို့လဲလှယ်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာစာတမ်းဆဲလ်ကြီးထွားမှုကိုထိခိုက်နိုင်ပါသည်အသွေး၌ qui biomarkers အားဖြင့်ယန္တရားများကိုသဘောပေါက်နားလည်ခြင်းဖွဘယ်လောက်ကိုကြည့်ချင်ပါတယ်။ "
ကအူသိမ်အူမကင်ဆာဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုအတိအကျအဘယ်အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖြစ်သော်လည်းအချို့သောအချက်များရောဂါ Developing များ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပှားနိုငျသညျ။
Selon အူကင်ဆာဗြိတိန်, စာတမ်းပါဝင်သည်:
သင့်ရဲ့အူသိမ်အူထဲမှာ Non-ကင်ဆာကြီးထွားလာခြင်းသည် (polyps) ၏တစ်ဦးကသမိုင်း
ထိုကဲ့သို့သောကိုရွှေအနာ colitis အမျှကာလကြာရှည်ရောင်ရမ်းအူသိမ်အူမရောဂါ Crohn ရဲ့ရောဂါ
type2ဆီးချိုရောဂါ
အရက်ဟာအန္တရာယ်တိုးပေးရန်နိုင်ပါစေဒါကလူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်, ထို NHS ရှင်းလင်းချက်: "အရက်သောက်သုံး-ထားပြီးသင်ပုံမှန်ကျယ်ပြန့်သောရေနှင့်ညီမျှသောက်ရအထူးသဖြင့်လျှင်, အူသိမ်အူမကင်ဆာတစ်ခုတိုးမြှင့်စွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြ။ "
အမျိုးသားများတွင်အူသိမ်အူမကင်ဆာ est သြစတေးတစ်နှစ်တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်အဝလွန်ခြင်းအထူးသဖြင့်, ထိုလေ့လာမှုများထပ်မံထိပ်တန်းတွေ့ရှိချက်ကျားကန်နဲ့တက်ကြွတဲ့လူနေမှုပုံစံကိုစောင့်ထိန်းခြင်းဟာတစ်နှစ်အမှုအောင်, ကနျြးမာရေးကိုယျခန်ဓာကဆက်ပြောသည်။
သြစတေးသည့်အန္တရာယ်ကိုတိုးပှားစေသောတချို့ကအစာခြေမမှန်ခြင်း, NHS "ဥပမာအားဖြင့်အူသိမ်အူမကင်ဆာ 10 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုပြီးအဘို့အ Crohn ရဲ့ရောဂါသို့မဟုတ်အနာ colitis ခဲ့သူကလူ-ရှိကျယ်ပြန့်အတွက်ပိုပြီးဘုံဖြစ်၏။ " Said
သငျသညျဤအအခြေအနေများ၏တဦးတည်းရှိပါက "သင်ပထမဦးဆုံးတိုးမြှင့်သင့်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေပြီးနောက်အကြောင်းကို 10 နှစ်များမှသည်အူသိမ်အူမကင်ဆာလက္ခဏာအဘို့အကြည့်ဖို့ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ-ups အများအားဖြင့်-ရှိပါလိမ့်မယ်။
"Check-ups တစ် colonoscope နှင့်သင်၏အူသိမ်အူမပါဝငျဆန်းစစ်ပါ - သေးငယ်တဲ့ကင်မရာပါရှိသည်ဒါကရှည်, ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပြွန်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အောက်ဆုံးသို့ဖြည့်စွက်၏။ "
အိတ်ဆောင်ပလက်ဖောင်းတစ်ဦးချင်းစီကင်ဆာလူနာတွေအတွက် chemo ထိရောက်မှုခန့်မှန်း